Lisi-pifidianana: mandeha ny fitsirihana | NewsMada
Lisi-pifidianana: mandeha ny fitsirihana
“Afaka folo andro, hampahafantarina antsika vahoaka ny vokatry ny fanadihadiana sy fitsirihana atao amin’ny lisi-pifidianana misy eto Madagasikara. Mba hananantsika toky izany fa fifidianana heverina hamoaka voka-pifidianana handraisan’ny rehetra anjara sy eken’ny besinimaro no hotanterahina eto.”
Izay ny fanazavan’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, teny Antaninarenina, afakomaly, momba ny fitsirihana ny lisitry ny mpifidy atao amin’izao. Nisy ny fivoriana voalohany niarahan’ny Ceni amin’ny solontenan’ny Fikambanana iraisam-pirenena frankofonia (OIF) hanao ny fitsirihana ny lisi-pifidianana eto Madagasikara. “Ny Ceni no nanafatra ireo manampahaizana iraisam-pirenena avy amin’ny ny OIF hitsirika ny lisi-pifidanana eto amintsika”, hoy izy.
Misy ny komity manokana hatsangana hanao izay fitsirihana ny lisi-pifidianana hampiasaina amin’ny 7 novambra izay. Ao anatin’izany ry zareo manampahaizana avy amin’ny OIF sy ny Ceni, ny solontenan’ny firaisamonina sivily sy ny solontenan’ny mpanao politika ary ny solontenan’ny kandidà.
Ho avy ny biletà tokana…
Ho tonga eto Madagasikara, ny 14 septambra ho avy izao, ny ampahany voalohany amin’ny biletà tokana hampisaina amin’ny fifidianana. Hampiasaina amin’ny fanentanana sy fampianarana ny mpifidy amin’ny fampiasana ny biletà tokana izany, ary hampiasain’ny kandidà amin’ny fampielezan-kevitra. Ny 16 oktobra no ho tonga avy atsy Afrika Atsimo ny biletà tokana tena hampiasaina amin’ny latsa-bato ny 7 novambra.